Oday waayeel Faransiis ah oo qaribi jiray shaagaga gawaarida haweenka xijaaban oo maxkamad… – Hagaag.com
Posted on 22 Febraayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Maxkamad Faransiis ah oo ku taal magaalada Strasbourg ayaa dhagaysanaysa kiis la yaab leh oo ku saabsan nin 73 jir ah oo Faransiis ah, kaas oo ku lug lahaa qaribaada shaagaga gawaarida gabdhaha Muslimiinta ah ee xijaaban.
Goobjooge la hadlay Warbaahinta Faransiiska ayaa sheegay in ninku uu u qirtay baarayaasha in uu ku qorayey gawaarida kadib marka uu qaribo shaagaga weedha ah “Xijaab la’aan”.
Sida laga soo xigtay bogga Internetka ee Faransiiska, Maxkamadda Strasbourg waxay ku soo oogtay “John Pierre” inuu qaribay hanti asaga oo ku saleeyey arrimo diin.
Waxaa la filayaa in la dhageysto dacwadiisa bisha June 2da ee soo socota, kadib markii kiiskiisa dib loo dhigay sababo la xiriira shaqo joojinta qareennada.
Warbaahinta MediaPart ayaa sheegeysa in hadii eedeymaha loo haysto John Pierre lagu helo, waxaa lagu xukumi doonaa seddex sano oo xabsi ah iyo ganaax dhan 45,000 Euro.
MediaPart ayaa waxay xustay inay sheekadu asalkeedu ahaa sanadkii 2017, markii laba hablood oo Muslimiin ah oo watay xijaab ay u gudbiyeen booliiska cabasho ah in gaadhigooda shaagaga la qaribay iyadoo weliba lagu qoray ereyo aheyd “Maya Xijaab” “No headscarf”.
Laakiin baaritaanka waqtigaas laguma guuleysan in la joojiyo dembiilaha, maadaama kaamirooyinka ilaalada aysan sheegin lambarka taarkada baabuurkiisa.
Laba sano ka dib, dhacdada ayaa waxay ku dhacday haweeney kale isla aaggii, laakiin markan kaamirooyinka ayaa si cad u muujinaya wajiga eedaysanaha, oo la xiray 14-kii Agoosto, 2019, wuuna qirtay wixii uu sameeyay.